Ny atao hoe tena Fitiavana
Tsaroanao ve ilay samaritana tsara fanahy ?
mino aho hainao tsara ;
Nandalo ilay traboina daholo ireo milaza azy ho mahafantatra an'Andriamanitra eny na ireo milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra aza kanefa dia nijery azy fotsiny.Kanefa rehefa nandalo ilay samaritana izay raha ara-tantara dia tsy mifampiraharaha amin'ity farany noho ny firehana tsy mitovy dia nijanona izy ary tena antra azy tanteraka izy ary tanatiny lalina dia onena azy mafy izy.
Rehefa izany dia notsaboiny ary mbola niantohany hatramin'izay mety ho lany rehetra aminy.
Tsaroanao ve ilay FITIAVANA nitiavan'ny Tompo anao?
-Mbola hatrany am-bohoka ianao dia efa nitia anao izy
-Na dia Andriamanitra aza izy dia tsy nataony zavatra nofikirina mafy izany ka nakany ny endriky ny mpanota ka nanekeny hatramin'ny fahafatesana mba hamonjena anao
-Nafoiny ho anao ny Zanany lahitokana hamonjeny anao
-Namaha ny gadranao IZY
-Nanasitranany anao : ny dian-kapoka taminy no nahasitrana anao
-Nanafaka anao tamin'ny fahavalo (devoly) Izy
-Nanandratra anao ho avo IZY toy ireo mpanjaka maro tao amin'ny baiboly sy ireo maro hafa IZY (tsy nataony nananjava maha ory ianao ary nampandry anao teo amin'ny ahimaitso izy...) satria Nanagana anao ho zanany IZY
-Sy ny hafa marobe izay efa nataony taminao ary mbola hataony aminao
*moa Tia azy va ianao ?
*mendrika ny fitiavany va ianao ?
Inty misy ohatra omeko anao ny maha samihafa ny FITIAVANA izay an'ANDRIAMANITRA amin'ny fitiavan'olombena izay raha ny tena marina dia ny fitiavana ny tena ihany .
indray andro JESOSY tao amin'ny tanana iray dia sendra nifanojo tamin'ny olona nampahoriany fanahy ratsy tamin'ny aretina an-taona maro kanefa rehefa nifanena tamin'ny Tompo izy dia teo noho eo no nanasitranan'nyTompo azy, tezitra mafy ny fariseo satria hono andro sabata no nanaovany an'izany fanasitranana izany.
Raha miasa ny Tompo amin'ny alalan'ny mpanompony dia mba tsy ho isan'ireo fariseo ianao, ka hanao hoe tsy tokony hanao izany ianareo na hoe tsy tokony amin'izao na amin'ny zaroa fa maro no mila fanafahana avy amin'ny Tompo ka na sabata na andro tsotra dia hitondra amim-bavaka ireo nampiasain'ny Tompo amin'zany ianao satria JESOSY no naniraka azy ireo.
-tsy fantany Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra (Baiboly) :"ny hafatry ny Tompo raha hiverina ho any amin'ny RAY IZY
-tia ny tenany izy ka izay mety ho voninahitra sy fahefana sy ny filana maro hafa no an-kamamiany (izao tontolo izao)
-tsy nahalala an'i Kristy izy ary tsy nanaiky azy satria hoy ny tenin'Andriamanitra :"Fa ho avy ny andro ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema ka; fa hangidihidy sofina izy , dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany ; ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano . "
-tsy fantany ny FITIAVAN'ANDRIAMANITRA izay tsy mifangaro amin'ny haratsiana: Tia ny mpanota Andriamanitra kanefa mankahala ny OTA .
Ny Fitiavana tsy mamporisika anao hanota ka hanao ny fanaon'ny mpanota fa kosa hanao toy ny Tompo izay tia ny mpanota ka nanolotra ny ainy hanavotany azy ary nilaza hatrany ny fahamarinana sy ny fiainana kanefa dia tsy nanana ota na dia kely monja aza tamin'izany fiarahany tamin'ny mpanota izany .
-Tsy ampahany amin'ny tenanao sy ny fiainananao no tadiavin'ny Tompo aminao fa ny aminao manontolo tsy misy fepetra : matetika dia isika no mitaky fepetra amin'ny Tompo amin'ny fanarahana Azy indrindra aza ny Tenin'Andriamanitra mihitsy no amboarina hifanaraka amin'ny filana tiana hatao.
-Mirehareha sy manararaotra ny FITIAVAN'ANDRIAMANITRA ianao ka manao hoe : rehefa manam-potoana aho na rehefa antitr'antitra aho vao manompo an' Andriamanitra izany hoy ianao : mbola tanora aho ka mbola te hanao fiainana (ota) amin'ny tsy mino dia tsy misy maminy izany fiainana tsy misy ota izany.
Ny ota anefa dia FAHAFATESANA fa tsy fiainana velively
Dia hoy indray ianao hoe : efa ela niainana aho fa tsy hitako mihitsy izay tsininy amin'zay tsy manompo an'Andriamanitra izany niadana sy nitafy ary niliba tamin'ny zavatra maro aho ka noho izany dia tsy maty antoka velively aho.
Aza adino fa hoy ny Tompo :" Tsy misy olona mahay manompo Tompo roa fa ny iray ho halany ary ny iray hamamiany ary koa izay vitanao dia entina hitsarana anao avokoa".
Tsy mahavonjy tena ianao ary tsy ny fepetra apetrakao amin'ny Tompo no hahavonjy anao fa tokana ihany Raiso JESOSY ho Tompo sy mpamonjy ny fianinanao ary ento ny hazo fijaliana fa mora sy maivana izany , tena fiainana ary tena hasambarana ny miaraka amin'ny Tompo kanefa ady hatramin'ny farany dia ady amin'ny devoly sy ny asany.
- Ny marina amin'ny Finoana no ho velona ny tenanao no atolory an'Andriamanitra izay fanatitra ankasitrahany tena FITIAVANA MARINA IZY tena FIAINANA TOKOA IZY ARY MANDRAKIZAY.
Ny hafatra dia hoy ny Tompo : "mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny Soratra masina na ny herin'Andriamanitra".
Aza varina amin'izao fiainana mandalo izao fa zava-poana sy misambo-drivotra avokoa izao rehetra izao fa izay manao ny Sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
Mirary anao mba tena haneo 'lay tena Fitiavana dia ilay FITIAVANA MARINA zay nomenan'Andrimanitra antsika tsirairay.
Voninahitra ho an'Andriamanitra